တရားစွဲခံခဲ့ရမှုအပေါ် အေးဆေးစွာ တုန့်ပြန်စကားဆိုလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည် - ZeeKwat
Home » Celebrity News » တရားစွဲခံခဲ့ရမှုအပေါ် အေးဆေးစွာ တုန့်ပြန်စကားဆိုလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်
တရားစွဲခံခဲ့ရမှုအပေါ် အေးဆေးစွာ တုန့်ပြန်စကားဆိုလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်
အလှမယ် ရွှေအိမ်စည်တစ်ယောက် တရားစွဲခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းစကားများ အလွန်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပြီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင်လည်း အလွန်ဂယက်ထလျက်ရှိပါတယ်။ ရွှေအိမ်စည်ကို Hello Madam Co.,Ltd. ရဲ့ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဒေါ်စိုးယုဝေ က သူမအား ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင် အသရေဖျက်မှုနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ထားရတာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ထိုအမှုကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွှေအိမ်စည်က သူမရဲ့လူမှုစာမျက်နှာမှတဆင့် အခုလို အေးဆေးစွာ တုန့်ပြန်စကားဆိုလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “ အိမ်စည့် ကို မှီပြီး သူတို့ attention ပြန်ယူ ချင်နေ တဲ့ အဖွဲ့အစည်း တခု အတွက်ကြောင့် ပရိသတ်ကြီး စိတ်မပူစေ ချင်ပါ ။ ဒီနေ့ ပဲခူးမှာ shooting ရှိတာ သွားရတာလေး နည်းနည်း နောက်ကျ တာက လွဲလို့ ပုံမှန် အတိုင်း အလုပ်တွေ ဆက်လုပ် လျက်ပါ ။ ဒီ ကိစ္စကြီး အဖြေထွက်ရင် ပရိသတ်ကြီး နှင့် တူတူ အောင်ပွဲ ခံဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေ နှင့်ပြီ ” ဆိုပြီး ​အေး​ဆေး တည်​ငြိမ်​စွာ ဆိုခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေအိမ်စည်ဟာ ငယ်ရွယ်ပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အပြင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားခိုင်မာသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စမဆို အေးဆေးစွာ ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ အခုလိုတုန့်ပြန်လိုက်မှုအပေါ်မှာလည်း ပရိသတ်များ ဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲ။
အလှမယျ ရှအေိမျစညျတဈယောကျ တရားစှဲခံရမှုနဲ့ပတျသကျပွီး သတငျးစကားမြား အလှနျပြံ့နှံ့လကျြရှိပွီး လူမှုကှနျယကျပျေါတှငျလညျး အလှနျဂယကျထလကျြရှိပါတယျ။ ရှအေိမျစညျကို Hello Madam Co.,Ltd. ရဲ့ မနျနဂေငျြး ဒါရိုကျတာ ဒျေါစိုးယုဝေ က သူမအား ဂုဏျသိက်ခာကဆြငျးအောငျ အသရဖေကျြမှုနဲ့ ဆကျသှယျရေးဥပဒေ ပုဒျမ ၆၆ (ဃ) ဖွငျ့ တရားစှဲဆိုခဲ့ထားရတာဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။
ထိုအမှုကိစ်စရပျနဲ့ပတျသကျပွီး ရှအေိမျစညျက သူမရဲ့လူမှုစာမကျြနှာမှတဆငျ့ အခုလို အေးဆေးစှာ တုနျ့ပွနျစကားဆိုလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ “ အိမျစညျ့ ကို မှီပွီး သူတို့ attention ပွနျယူ ခငျြနေ တဲ့ အဖှဲ့အစညျး တခု အတှကျကွောငျ့ ပရိသတျကွီး စိတျမပူစေ ခငျြပါ ။ ဒီနေ့ ပဲခူးမှာ shooting ရှိတာ သှားရတာလေး နညျးနညျး နောကျကြ တာက လှဲလို့ ပုံမှနျ အတိုငျး အလုပျတှေ ဆကျလုပျ လကျြပါ ။ ဒီ ကိစ်စကွီး အဖွထှေကျရငျ ပရိသတျကွီး နှငျ့ တူတူ အောငျပှဲ ခံဖို့ စိတျလှုပျရှားနေ နှငျ့ပွီ ” ဆိုပွီး ​အေး​ဆေး တညျ​ငွိမျ​စှာ ဆိုခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ရှအေိမျစညျဟာ ငယျရှယျပွီး ထူးခြှနျထကျမွကျတဲ့ မိနျးကလေးဖွဈတဲ့အပွငျ ဆုံးဖွတျခကျြပွတျသားခိုငျမာသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ မညျသညျ့ကိစ်စမဆို အေးဆေးစှာ ဖွရှေငျးတတျတဲ့ ရှအေိမျစညျရဲ့ အခုလိုတုနျ့ပွနျလိုကျမှုအပျေါမှာလညျး ပရိသတျမြား ဘယျလိုမွငျမိပါသလဲ။